बाबु–छोरीबीचको सोच्नै न’सक्ने यो सम्वाद – List Khabar
Home / समाचार / बाबु–छोरीबीचको सोच्नै न’सक्ने यो सम्वाद
बाबु–छोरीबीचको सोच्नै न’सक्ने यो सम्वाद
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 79 Views
का’ठमाडौं । बाबु–छो’रीबीचको सम्बन्ध शब्दमा ब्याख्या गर्न सकिदैँन् । तर अहिले केहि मान्छेहरु त्यो सम्बन्धको कद’र गर्न सकिरहेका छैनन् । ने’पालमा पनि पत्याउन गा’ह्रो पर्ने अ’प’रा’धहरु भइरहेका छन् । के एक छोरीले आफ्नै बुबालाई शारीरिक ति’र्खा मेटाईदेऊ भ’नेर प्र’स्ताव राख्न सक्छिन् ?
तपाईं यो कुरालाई बिश्वास गर्न सक्नुहुन्न । तर य’हाँ उल्लेख गरिएकी छो’रीको कुरा थाहा पाएर तपाईं स्तब्ध हुनुहुनेछ । क्रेजी न्युज’को खबर अनुसार, ३६ वर्षीया मा’विस नामक युव’तीले आफ्नो बुबालाई त्यस्तो प्र’स्ताव राखेकी हुन् ।
यदि ति केटी मा’नसिक रूपमा ठी’क छैन कि भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं ग’ल’त हुनुहुन्छ । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि युवती पूर्ण रूपले स्वस्थ छिन्। वास्तवमा, मावि’सकी आमाको मृ’ त्यु भैसकेको छ ।
तर उनको बु’बाको कार्यहरु अझै पनी एक प्रे’मी भ’न्दा कम छैन । त्यसैले उनले घरमा ज’वान केटीहरुलाई घरमा ल्याउने गर्थे र आमासँग हुने ग’रेको का’ र्य गर्दथे ।
छोरीले त्यसरी बाबुलाई प्र’स्ताव राख्नुको कारण थप रो’चक रहेको छ । दैनिक के’टीहरु ल्याएर आउन था’ले’पछि बाबुलाई पा’ठ सिकाउन छो’रीले त्यस्तो कदम उठा”एकी हुन् ।
उनका ७० व’र्षीय बुबा नजुजो दाईमानी भन्छन्, ‘छो’रीसँग त्यो मैले सोच्नपनि सक्दिन थिए । उनी मेरी छोरी हुन् र उनीसँग यो गर्ने सोच्न पनि सक्दिन् ।’ नजु’जो भन्छन् कि यो रो’जार्ई छोरीको हो र अरु कसैलाई यसमा टि’प्प’णी गर्ने अधि’कार छैन ।
Previous यी ४ राशी हुने व्यक्ति हुन्छन् सबैभन्दा धनी, तपाईको कुन ?
Next कक्षा १२ को परीक्षा भदौ ३० देखि सञ्चालन हुने